Shina namboarina boaty fanomezana boribory vita amin'ny boaty mpamokatra sy mpamatsy boaty avo lenta | Huaguang
Namboarina ho boribory fanomezana boaty misy boaty napetraka avo lenta
manodidina boaty fanomezana
Size: 30 * 30 * 20cm
Antsipirian'ny fonosana: pcs telo ao anaty polybag na ny zavatra takinao
Seranana: Xiamen / Fuzhou
Habetsahana (boaty) 1 - 500 501 - 1000 > 1000
Est. Fotoana (andro) 15 17 Hifampiraharahana
Ny famolavolana fonosana dia fikarohana mavitrika an'izao tontolo izao miaraka amin'ny fahatsapana fahitana ho foibe ary ny fahatsapana efatra hafa ho mpanampy. Amin'ny fiainana, ny entam-barotra tsirairay dia manentana mafy ny fahatsapan'ny olona amin'ny fomba samihafa, miteraka faniriana hividy. Azo lazaina fa ny fiangaly fonosana amin'ny fonosana dia fiaraha-monina maoderina mampiasa ny "five sens" izay midika hoe marketing izay manintona. Androany, andao hiresaka momba ny famolavolana fonosana amin'ity boaty fanomezana ity:
Ny fahitana dia ivon'ny zavakanto sy ny endrika, miaraka amin'ny afovoan'ny endrika kanto hita maso na aiza na aiza, ny lokon'ny famolavolana fonosana, sary, soratra, endrika, sns., Dia mifototra amin'ny sary ho ivon'ny famolavolana, amin'ny alàlan'ny singa hita maso sy fampiasana ary fitambarana mety, mba hisarihana ny mpanjifa, hahatonga ny fahalianan'ny mpanjifa, handrisika ny mpanjifa hividy. Anisan'ireo singa maso amin'ny fonosana ireo, ny loko, ho singa hita maso manan-danja indrindra, dia nanjary endrika fiteny manan-danja ho an'ny mpamorona.
Ary ny famolavolana ny boaty fanomezana, matetika dia tsy mila lahatsoratra be loatra, toy io boaty fanomezana boribory io, tsy misy teny iray. Ny boaty fanomezana sasany dia hatao pirinty amin'ny teny tsotra ihany koa, toy ny fiarahabana na fanehoam-pitiavana.
Ny loko dia mety hahatonga ny olona hamorona fiarahana mivaingana sy tsy azo ovaina, toy ny loko mafana mahatonga ny olona hieritreritra ny masoandro, ny afo na ny zavatra mahery setra, ary ny loko mangatsiatsiaka dia mety hahatonga ny olona hifandray amin'ny rano, rivotra, hieritreritra kalitao mitombina sy milamina.
Mena mena ity boaty fanomezana ity, mahasarika ny mason'ny mpanjifa ny loko mafana toy izany, amin'ny sary hisarika ny sain'ny mpanjifa.
Faharoa, ny fifandraisana misy eo amin'ny singa hita maso sy ny lafiny toekarena sy ny kolontsain'ny mpanjifa dia manondro fa ny mpanjifa samihafa dia samy manana ny fahaizany ara-toekarena sy ny haavon'ny kolontsaina sy ny fanabeazana. Ny fankasitrahan'izy ireo ny hatsarana sy ny kalitaon'ny fiainana dia tsy mitovy, hita taratra amin'ny fanekena ny loko sy ny singa hita maso hafa, hisy fahasamihafana lehibe. Noho izany, ny famolavolana fonosana dia tokony hitandrina tsara amin'ny fisafidianana ireo loko, sary ary singa mety.
Ary farany, ny fifandraisana misy eo amin'ny singa hita maso sy ny tontolon'ny fiainan'ny mpanjifa dia midika fa ny fonosana dia ao anatin'ny tontolo manokana an'ny fianan'ny mpanjifa hatrany. Noho izany, ny loko sy ny firafitry ny lahatsoratra isan-karazany amin'ny fampiasana isan'andro mifandraika amin'ny fonosana dia tsy maintsy dinihina amin'ny famolavolana ny fonosana, mba hahatonga ny sary fonosana hita maso mifanaraka amin'ny tontolon'ny fiainan'ny mpanjifa.
Famolavolana boaty fanomezana be dia be, tsy maintsy maneho ny atiny atolotra ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny famolavolana. Ny boaty fanomezana sasany, na izany aza, dia tena tsotra, toy ny endrika boaty tsotra sy mahazatra, na ny fampiasana loko matevina, koa mahatonga ireo boaty fanomezana ho lasa mahazatra sy maharitra. Tahaka ity boaty fanomezana boribory ity, ny endriny tsotra dia tsy afaka manafina ny fon'ny olona manome.
Teo aloha: sarony avy amin'ny boaty fitahirizana trano mitazona baoritra boaty taratasy
Manaraka: Boaty kilalao ho an'ny ankizy valizy taratasy baoritra misy tanany
Boaty fanomezana manokana
Kitapo fonosana famolavolana
Boaty fanomezana firavaka
CONSULTATION MAIMAIMPOANA 0086-18850140115
ADDRESS Trano 4, No. 20, Zhaoyu Road, Gaishan Town, Fuzhou, Fujian, Sina
Fanontana pirinty loko misy loko vita amin'ny kofehy fotsy 350g boaty ivelany
Kitapo taratasy fikarakarana hoditra dia ampidirina amin'ny boaty karazana boky PVC
© Copyright - 2020-2023: Voatahiry ny Zo rehetra.